Adobe Premiere Rush wuxuu hadda si buuxda ula jaan qaadayaa Apple's M1 | Waxaan ka socdaa mac
Adobe Premiere Rush wuxuu hadda si buuxda ula jaan qaadayaa Apple's M1
Ignacio Sala | | Noticias, Barnaamijyada Mac
Adobe ayaa sii daayay casriyeyn weyn oo loogu talagalay Premiere Rush shalay, isagoo intaa ku daray waafaqid buuxa oo leh M1 chip, oo ay weheliso casriyeyn yar oo taxane ah oo loogu talagalay Premiere Rush iyo Premiere Pro. Noocaan cusub wuxuu yimid dhowr maalmood ka dib markii la bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee sidoo kale loogu talagalay Apple Silicon.
Premiere Rush waa codsiga adobe tafatirka video loogu talagalay in lagu fududeeyo hal-abuurka waana bedelka Apple ee Final Cut Pro. Cusboonaysiintaan cusub ee loo yaqaan 'Premiere Rush' waxay hagaajinaysaa xawaaraha iyo ku habboonaanta kombiyuutarada miiska iyadoo la isticmaalayo qalabka 'M1 chip'.
Dhinaca kale, Premiere Pro waa waxaa ku jira horudhaca Lumetri firfircoon. Tilmaamaha Lumetri ayaa hadda muujinaya qaab isku xigxiga hadda iyo thumbnails ee Lumetri presets ee saamaynta gudiga si firfircoon u cusbooneysiiya, oo siinaya horudhaca hore.
Premiere Rush ee iOS ayaa sidoo kale la cusbooneysiiyay oo ay ku jiraan liiska macnaha guud ee waqtiga. Isticmaalayaashu waxay hadda ku dhejisan karaan fiidiyowga fiidiyowga ee waqtiga si ay u soo qaadaan menu-ka macnaha guud ee kala-goynta, nuqul, ama tirtiridda clip-ka. Intaa waxaa sii dheer, isticmaaleyaashu waxay ku ciyaari karaan fiidiyoow fiidiyoow ah oo maqal ah si ay u kala soocaan maqalka codka iyo fiidiyaha.
Shaqeynta dib u dejinta wanaagsan ayaa sidoo kale lagu daray, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay dib u deji dhammaan midabyada, maqalka iyo isbeddelada dejinta.
Xusuusnow in processor-ka Apple ee M1 laga heli karo oo keliya MacBook Air, 13-inch MacBook Pro iyo Mac mini, in kasta oo kan xiga Abriil 20, ballaarin kara qalabka kala duwan oo leh processor-kan oo leh qaab dhismeedka ARM.
Si aan u soo dejisanno nuqulkan cusub, waa inaan furnaa arjiga Adobe Creative Cloud oo dooro nooca ARM ee codsigan si aad u soo dejiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Adobe Premiere Rush wuxuu hadda si buuxda ula jaan qaadayaa Apple's M1
Waxaan horey u ognahay taariikhda la sii deyn doono taxanaha Stephen King ee Apple TV +
Maxaan ka filan karnaa dhacdada Abriil 20